Aubameyang Oo Daboolka Ka Qaaday Hal Wax Oo Uu Waayey Intii Uu Arsenal Joogay – Latest Sports News
Aubameyang Oo Daboolka Ka Qaaday Hal Wax Oo Uu Waayey Intii Uu Arsenal Joogay
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Aubameyang ayaa shaaciyey hal shay oo uu u darsaday oo uu waayey intii uu joogay garoonka Emirates.
Weeraryahanka reer Gabon oo Arsenal ay January 2018 kaga soo iibsatay Borussia Dortmund lacag dhan £56 milyan, waxaana muddadii uu joogay oo sannad iyo bil ah uu u saftay 52 ciyaarood oo uu u dhaliyey 30 gool, hase yeeshee xili ciyaareedkii hore waxa uu ku fashilmay inuu ka caawiyo inay kaalmaha sare ku dhamaystaan si ay uga qayb-galaan Champions League.
Labadii xili ciyaareed ee u dambeeyey, Arsenal kamay qayb-galin Champions League, waxaana ku yimid hoos u dhac weyn iyadoo kaalmaha shanaad iyo lixaad ee horyaalka Premier League ku dhamaysatay, balse hadda ayay dib ugu soo laabatay booska afraad markii ay Axaddii 2-0 ku garaacday Manchester United.
Aubameyang oo ka hadlay muddadii uu joogay Arsenal iyo shayga uu waayey, ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay xamaasaddii tartanka Champions League ee uu u hoggaamin jiray kooxdiisii hore ee Borussia Dortmund, laakiin wuxuu tilmaamay in hadda ay rajo fiican ka qabaan inay boos ku yeeshaan tartankaas oo ay xili ciyaareedka dambe ka qayb-geli doonaan.
“Waa inaanu ka qayb-galno Champions League si uu xili ciyaareedkani noogu noqdo mid guul ah, waana taas hadafkayagu illaa bilowgii xili ciyaareedka.” Sidaas ayuu yidhi Aubameyang.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu si cad u tilmaamay in Arsenal uu u darsaday ciyaaraha Champions League oo aanu ka qayb-gelin intii uu Arsenal joogay, waxaanu yidhi: “Dabcan waanu tabnay. Marka aad eegto TV-ga ee aad maqasho muusikada, waa shay cajiib ah. Markaa waa inaanu sare u kacno oo aanu ku guuleysano ciyaaraha si aanu booska afraad ugu dhamaysano.”
Xiddiga reer Gabon oo hadalkiisa sii wata waxa uu soo bandhigay kalsoonida uu ku qabo inay booska afraad xajisan doonaan, waxaanu yidhi: “Wax kastaaba gacantayada ayay ku jiraan, waananu ognahay inay adag tahay inaad ku dhamaysato afarta ugu sarreeya laakiin waanu isku kalsoonahay, waxaananu doonaynaa inaanu kusoo laabano Champions League.”